Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex yaseTuzla - indawo yoku - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex yaseTuzla - indawo yoku
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlmir
Inzuzo yale flethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi aliqela kukuba ikumbindi weTuzla kwaye kumgama wokuya kuzo zonke iindawo ezinomtsalane. Inzuzo yeflethi okanye indlu ekwicomplex kukuba uza kuba nendawo yokupaka ENGABHATALELWAYO efumanekayo phambi nje komnyango weflethi okanye indlu ekwicomplex, akukho mfuneko yokubhatala iindawo zokupaka zesixeko. Ilungele iindwendwe ezi-2 ukuya kweziyi-6. Njengababuki zindwendwe silapha ukuze senze ukuhlala kwakho konwabise kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona siyakwazi ukutshintsha amaxesha okufika nawokuhamba, sazise nje kwaye siza kuzama ukulungisa izinto.
Iflethi inegumbi lokulala elinye elinebhedi enkulu nesofa kunye negumbi lokuhlala elinye/igumbi lokulala elinobukhulu obuyi-queen kunye nesofa ekwayibhedi. Igumbi lokuhlambela lilungiswe ngokupheleleyo. I-WiFi yasimahla kunye ne-TV ye-cable enee-chanels ezingaphezu kwe-150. Zonke iindawo ezinomtsalane esixekweni (inkcubeko, ukuzonwabisa, ukuzonwabisa ebusuku) zikumgama okufuphi ngeenyawo:
I-Freedom Square (trg slobode) - 400m/5 imiz.
Amachibi asePanonian - 700M/8min.
Isikhululo sebhasi - 1km/12 imiz
Iziko Lesixeko saseBingo -
iikhilomitha eziyi-20 Isikhululo seenqwelo-moya i-Tuzla - ikude ngeekhilomitha eziyi-14
Yiya ezantsi uze unqamule ibhulorho i-Statue kwaye uphakathi e-Tuzla. Yonwabela iivenkile ezininzi zekofu kwintsapho egcwele i-Freedom Square okanye ubumnandi basebusuku kuyo. Le yindawo apho unokufumana khona iivenkile zokutyela zaseBosnia. Ivenkile yokutya kufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex.
Umbuki zindwendwe ngu- Almir
Sithetha isi-bosnian, isi- kunye nesiJamani. Ungasifumana nge-viber kunye ne-hatsup.